Amanqanaba mabini aMacandelo okuBlower Blower, China Abenzi bamacandelo amabini abaMile abaMvelisi beBlower, abaXhasi, abaFektri -NANTONG RONGHENG YOKUSINGQONGILEYO KWIZIXHOBO ZOKUSEBENZA, LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Amabakala amabini eBanga leBlower Blower
Amanqanaba amabini oMdundo weBlower Blower
I-RHR yamanqanaba amabini omboniso we-blower blower sisizukulwana esitsha seemveliso eziyilelwe kwaye zaphuhliselwa uxinzelelo oluphezulu kunye nokusetyenziswa kokuhamba okukhulu. Xa kuthelekiswa nesantya esiphezulu sabalandeli be-centrifugal kunye nabalandeli bamanqanaba ngamanqanaba e-centrifugal, ayinakho ukunyuka, akukho sitolo, ukulungelelanisa iimeko zomsebenzi kunye notyalo-mali. Izibonelelo ziindleko eziphantsi kunye nokusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
I-RHR yezigaba ezibini blower yamkela ngokungqongqo ukubala ukuqinisekisa ukuba i-blower iphantsi komgangatho wokusebenza, kwaye umphambili kunye nomqolo ophambili wamanqanaba amabini aphantsi kwemeko ye-1: 1 uxinzelelo lomlinganiso, olwehlisa ixabiso elipheleleyo loxinzelelo lokwahlula isigaba ngasinye, kunciphisa ukuvuza ngaphakathi, kwaye kunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Uyilo lwe-counter-flow counter-flow heat exchanger luyonyusa kakhulu umthamo wokungenisa umoya phakathi kwamanqanaba. Xa i-blower isebenza ngaphezulu kwe-120KPa, inokonga ukuya kuthi ga kwi-30% yamandla xa kuthelekiswa nomphehli wemveli. kunye nezinye izixhobo zokuhamba ezinkulu zemveli.
I-RHR blower isebenzisa isiphelo somoya sangaphambi kwenqanaba, isiphelo sangaphakathi, isiphelo somoya sasemva kwenqanaba, iskim sokupholisa amanqanaba amathathu, kwaye samkela uyilo oludibeneyo. Inye kuphela imibhobho yamanzi okupholisa efunekayo ukuqinisekisa ukuba iyunithi yonke iphantsi kokhuseleko lokupholisa amanzi olusebenzayo. Uyilo ludweliso oluphezulu, ukusebenza kakuhle kokupholisa, kunye nofakelo olufanelekileyo kunye nokusetyenziswa.
● Ifom yoqwalaselo: Inqanaba eliphakathi kwifom yokutshintsha ubushushu;
● Ukupholisa: Indawo yokufudumeza ubushushu kukupholisa ukuhamba, kwaye isebenzisa ukupholisa into enye kunye namacala omabini omamkeli.
● Umlinganiselo woxinzelelo: 1: 1 ratio;
● Isitshisi sokufudumeza umzimba: Isixhobo sokufudumeza umzimba samkela iintlobo ngeentlobo zokufudumeza ezifana netyhubhu kunye nembasa;
● Iprofayili yokunyanzeliswa: iprofayile ekhethekileyo ye-blade-blade CONCH, ukuhamba kancinci komoya, ukusebenza kakuhle kwevolumu, ukusebenza ngokukuko, ukonga umbane kunye nengxolo ephantsi
● Imowudi yokuhambisa: ibhanti yamanqanaba amabini, uqhagamshelo ngokuthe ngqo kumanqanaba amabini;
● Itanki yeoyile: itanki yeoyile enye / ephindwe kabini uyakhelo, ubumbeko oluguquguqukayo
Ising Ukunyusa uxinzelelo: 58.8 ～ 200kPa;
Isantya esisebenzayo: 500 ~ 1600RPM;
AmaNqaku: Ukusetyenziswa kwamanqanaba amabini kuyanzima ekukhetheni uhlobo. Ukuqinisekisa ukusebenza koyilo oluphezulu, nceda unxibelelane nenkampani yethu ukuyila uhlobo olukhethiweyo ngqo kuwe.